အီလက်ထရောနစ်က Wired ရပ်ကွက်ခေါ်ဆိုမှုစနစ် China Manufacturer
Hunan Eter Electronic Medical Project Stock Co., Ltd. [Hunan,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer Main Mark: Africa , Asia , Caribbean , East Europe , Middle East ထုတ်ကုန်:11% - 20% Cert:ISO13485, ISO9001, OHSAS18001, ASME, CE ဖေါ်ပြချက်:ရပ်ကွက်ခေါ်ဆိုမှုစနစ်,Wired ရပ်ကွက်ခေါ်ဆိုမှုစနစ်,အီလက်ထရောနစ်ရပ်ကွက်ခေါ်ဆိုမှုစနစ်
Home > ထုတ်ကုန်များ > သူနာပြုခေါ်ဆိုမှုစနစ် > Two-ကြိုးသူနာပြုခေါ်ဆိုမှုစနစ် > အီလက်ထရောနစ်က Wired ရပ်ကွက်ခေါ်ဆိုမှုစနစ်
အီလက်ထရောနစ်က Wired ရပ်ကွက်ခေါ်ဆိုမှုစနစ်
HS Code ကို: 8517122000
ETR အီလက်ထရောနစ်က Wired ရပ်ကွက်ခေါ်ဆိုမှုစနစ်ဆေးရုံများအတွက်မဆိုပိုင်ထိုက်သောအခွအေန၏အမှု၌သူနာပြုရုံးများအတွက်ရပ်ကွက်အတွင်းရှိလူနာများနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များအကြားဆက်သွယ်ရေးပေးဘို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ပလပ်စတစ်မာစတာတယ်လီဖုန်းရေပိုက်, ဆန်းသစ်အကျဉ်းချုပ် fixed mode ကို, ပြည့်စုံသတင်းအချက်အလက်အီလက်ထရောနစ်အကျဉ်းချုပ်နှင့်အသံအရေအတွက်ကိုသတင်းပို့စနစ်ကသွန်း-သို့-တစ်ချိန်က Deluxe နှင့်အတူကအတူတူပင်အမျိုးမျိုး၏သူတို့အားထုတ်ကုန်ထက်ပိုမိုမြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်-ကုန်ကျစရိတ်ရိက္ခာရှိပါတယ်။
အီလက်ထရောနစ်က Wired ရပ်ကွက်ခေါ်ဆိုမှုစနစ်၏ 1. M က ain ဝိသေသလက္ခဏာများ :
1. Two-လမ်း Calling ပြန်ပြောဆိုပါ။
2.Simultaneously 10 sickbed extension များထံမှဖုန်းခေါ်ဆိုမှုခံယူအခြား extension များအနေဖြင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုထိရောက်သောရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
4. Volume ကိုချိန်ညှိ
စံချိန်စစ်ဆေးမှုများတောင်းဆို On-line ကိုနံပါတ်၏လုပ်ငန်းဆောင်တာနှင့်အတူ 5. , Self-စစ်ဆေးမှုများ, အသံကြိမ်နှင့်ကျည် set malfunctions ။
ဘုံတယ်လီဖုန်းသို့မဟုတ်အချင်းချင်းဖုန်းကိုတပ်ဆင်မှုအတွက်မထည့် 6. ။
7. အချိန် display ကို
8. လူနာအရေအတွက်က display ကို
9. အဆိုပါအကျဉ်းချုပ် 60 စိတ်ရှည်ကတ်များဖြည့်စွက်နိုင်ပါသည်နေကြသည်။
အနက်2သာလွန် အီလက်ထရောနစ်က Wired ရပ်ကွက်ခေါ်ဆိုမှုစနစ်:
Precision: ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိဘဲမျိုးစုံ extension များ၏တစ်ပြိုင်နက်ခေါ်ဆိုမှု။
ယုံကြည်ကိုးစားမှုသူနာပြုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုစနစ်ကဆေးရုံများ, စောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့များကကျန်းမာရေးပြန်လည်နာလန်ထူရေးစင်တာ, သူနာပြုနှင့်လူနေအိမ်အိမ်များအပါအဝင်ဖောက်သည်များ၏ကျယ်ပြန့်များအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည်။
ETR အီလက်ထရောနစ် Interphone စနစ် ဆေးရုံများ, စောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့များကကျန်းမာရေးပြန်လည်နာလန်ထူရေးစင်တာ, သူနာပြုနှင့်လူနေအိမ်အိမ်များအပါအဝင်ဖောက်သည်များ၏ကျယ်ပြန့်များအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည်။
ကုန်ပစ္စည်းကဏ္ဍ : သူနာပြုခေါ်ဆိုမှုစနစ် > Two-ကြိုးသူနာပြုခေါ်ဆိုမှုစနစ်
High Quality ဆေးရုံကြီးအရေးပေါ်သူနာပြုခေါ်ရန်ဘဲလ်စနစ်
ဆေးရုံက Wired ဆေးရုံသူနာပြုခေါ်ရန်ဘဲလ်စနစ်
စက်ရုံစျေးနှင့်အတူက Wired Intelligent သူနာပြုခေါ်ဆိုမှုစနစ်
ရပ်ကွက်ခေါ်ဆိုမှုစနစ် Wired ရပ်ကွက်ခေါ်ဆိုမှုစနစ် အီလက်ထရောနစ်ရပ်ကွက်ခေါ်ဆိုမှုစနစ် ဆေးရုံရပ်ကွက်ခေါ်ဆိုမှုစနစ် ရပ်ကွက်ဝန်ဆောင်မှုစနစ် အရေးပေါ်ခေါ်ဆိုမှုစနစ် ရပ်ကွက်အရေးပေါ်ခေါ်ဆိုမှုစနစ် ရပ်ကွက်လူနာခေါ်ဆိုခြင်းစနစ်